Bun - Wikipedia
Kani waa maqaal ku saabsan Bunka.
Bogaga "Koofi", "Coffee" iyo "Qaxwe" halkan ayaa laga soo toosiyay.
Bun, Qaxwe (; ; ) waa midho la jajabiyey oo lagu kariyey biyo (inta badan kuleyl ah, laakiin mararka qaar waxaa jira mid qaboow) kaasi oo dadku cabaan. Sida caadiga ah, Bunku waa cabitaan ka mid ah cuntoda kaas oo laga sameeyo midhaha geedka bunka. Geedka bunka oo lagu magacaabo Koffea wuxuu asal ahaan ka yimid wadanka Yemen, halkaasi oo la sheegay in lagu cabi jirey qiyaastii qarnigii 15aad; maanta waxaa soo saara oo ka ganacsada in ka badan 70 wadan oo intooda u badan degan gobolada Dhulbadhaha ee ka mid yihiin labada Ameeriko (Koonfur iyo Waqooyi Amerika), koonfurbari Aasiya, Hindiya iyo wadano badan oo qaarada Afrika..
Koon Bunka madoow ah
Kuleyl ama qaboow (sida badan kuleyl)
JabuutiItoobiya(noocyadii ugu horeeyay ee la cabo)
Qiyaastii qarnigii 15aad
Madoow, coowlaan, madoow cowlan, cowlaan khafiif ah
Qadhaadh markuu bila sokorta yahay
Labada nooc ee ugu caansan Bunka la isticmaalo waxay kala yihiin nooca loogu jecelyahay e Bunka Carabta iyo nooc ka khafiifsan oo lagu magacaabo Bunka Robusta.
Marka midhaha koofigu bislaado ayaa laga soo guraa geedka Caffea, ka dib waa la qalajiyaa, la jajabiyaa ilaa la baceeyo oo la dhoofiyo. Caalamka maanta aan ku noolnahay Bunku caan ayuu ka yahay, meelo badana waxaa looga isticmaala si joogto ah kaasi oo ka mid ah nolosha maalinle.
Bunka wuxuu leeyahay xoogaa asiidh ah (pH 5.0–5.1) wuxuuna fifircooni siiyaa maskaxda dadka sababtoo ah wuxuu leeyahay aalada loo yaqaano "Kaffeine" oo ah mid lala qabsado. 
Midhaha koofigu waa kuwo yaryar, wareegsan oo leh midab madoow ah. Midhaha koofiga waa la burburiyaa si loogu dhex milo biyo iyo sonkor.
Ereyga "Bun" asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa luuqada amharada ee wadanka Itoobiya. Soomaalidu weey soo amaahatay ereygan, laakiin dadka qaar ayaa waxay ku murmaan in ereyga Qaxwe yahay kan ugu haboon in lagu magacaabo Koofiga.
Markii la fiiriyo dhaqanka Soomaaliyeed, bunka waxaa inta badan la isticmaalaa habeenka iyo subaxa jimcaha. Gobolada qaar, gaar ahaan koonfurta Soomaaliya waxaa caan ka ah bunka iyo cambuulada, Daango iyo Shaax; kuwaasi oo ah cunto fudud oo dadku isticmaalaan wakhtiyo badan. Bunka soomaaliya waa uu ka baxaa, laakiin wadanka ugu horeeyay aduunka oo bunka isticmaalay waxee eheed wadanka Itoobiya. Maanta bunka waxaa laga soo saaraa meelo badan oo caalamka ah.
Bunka waxaa kaloo loo isticmaalaa gaxwo ahaan oo dad ka soomaamiyeed aad u is ticmaalaan qaasatan subaxdii.
↑ "Magacyada ugu caansan Koofiga; Bun, Qaxwe"
↑ A Bean That Traveled the World
↑ Coffee and Health. Thecoffeefaq.com (2005-02-16). Retrieved January 22, 2013.
↑ Total and specific fluid consumption as determinants of bladder cancer risk, 2006 Villanueva Cristina M., Cantor Kenneth P., King Will D., Jaakkola Jouni J.K., Cordier Sylvaine, Lynch Charles F., Porru Stefano, Kogevinas Manolis, International Journal of Cancer
↑ Richard Pankhurst, Economic History of Ethiopia, Addis Ababa University, Haile Selassie I University, 1968, 198
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bun&oldid=219696"
Last edited on 15 Oktoobar 2021, at 04:45
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 15 Oktoobar 2021, marka ee eheed 04:45.